Somalia: Qaraxyo lala beegsaday Ciidamada Itoobiyaanka oo ay ku dhinteen askar iyo dad rayid ah - Wargane News
Home Somali News Somalia: Qaraxyo lala beegsaday Ciidamada Itoobiyaanka oo ay ku dhinteen askar iyo...
Wararka kasoo baxaya magaalada Baardheere ee gobalka Gedo ayaa sheegaya in magaalada ay ka dhaceen ugu yaraan 4 qarax oo lala beegsaday kolonyada ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada.
Qaraxyadan ayaa la sheegay inay geysteen khasaaro iyo dhimasho soo gaartay ciidamada Itoobiya oo la sheegay xiliga la qarxiyey inay ku jireen biyo dhaamis iyo adeeg, walow ciidamadaasi aysan si rasmi ah u sheegin inta uu la eg yahay khasaaraha askartooda soo gaaray.
Ugu yaraan labo qof oo rayid ah ayaa lagu soo waramayaa inay ku jiraan dadka ku dhintay weeraradan.
Sidoo kale ma jirto weli cid sheegatay weeraradan bambaano balse waa kuwo u muuqda inay ka danbeeyaan kooxda Al Shabaab oo weli ku sugan nawaaxiga degmada Baardheere oo ah magaaladii ugu danbeysay ee kooxdaasi laga saaray gobalka Gedo.
Weeraradan ayaa sidoo kale kusoo beegmay xili uu maamulka Juballand sheegay in dhankooda iyo ciidamada Itoobiya ee AMISOM ay bilaabayaan hawlgalo cusub oo kooxda Al Shabaab looga saarayo deegaanada ka tirsan maamulka Juballand.
Maalinimadii shalay ayey sidoo kale qaraxyo aan khasaaro geysan ay ka dhaceen magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Juballand.
Kooxda Al Shabaab ayaa xiligan bilaabay weeraro balaaran oo ay ka geysanayaan koonfurta Soomaaliya oo ay ugu danbeeyeen kuwii ka dhacay Baydhabo iyo Caasimada Muqdisho, kooxdan ayaa la sheegay inay dooneyso inay dar dar geliso awooda ay ku leedahay gobalada koonfurta xili sanadkan lagu wado in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorashada Dowlada Federaalka.